Medicine namuhla mhlawumbe egatsheni kakhulu ngamandla ukuthuthukisa isayensi. Lokhu kungenxa okukushoyo ezinkulukazi nomphakathi.
Kungani emisha imithi baningi?
Lena ngokuyinhloko ngenxa yokuthi ukuthi ukukhula kwawo kuxhomeke kulokho izinga lempilo ngamunye umuntu. Kulesi legatsha yolwazi yesayensi ngonyaka etshaliwe omkhulu kakhulu imali. Ngenxa yalokho-ke, intuthuko enkulu kwezokwelapha zenzeka cishe masonto onke.
izinga eliphezulu ama-discovery amasha kulo mkhakha kungenxa ngisho nenani elikhulu abathanda, abasebenzela hhayi nje imali, kodwa futhi zangisiza ekwenzeni izimpilo zabantu kulula, okungcono nokude. Ngaphandle yini enye kwezokwelapha akukho igunya olulodwa, nesayense ngokwawo kakhulu, sihlanganise indawo ebanzi kakhulu. Ngakho-ke, kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka ukuthi bangaki kwaba ezintsha kwezokwelapha, kuba ososayensi izohlala isimu omkhulu ngenxa yomsebenzi.
Innovations kwezokwelapha: izibonelo okutholakele
Ngokuhamba kwesikhathi, inani impumelelo okukhulu kule nkambu ezikhulayo sisondela ngokungenakuvinjelwa. Okwamanje, ososayensi sebeqala kakade owakhethwa ukuba kulungiswe udaba donor izitho. Sekuyisikhathi eside yamemezela ukuthi le nkinga iqhubeka ngokuzimela emva imishini izokwakhiwa yokutshala izitho ngaphandle kwesibeletho. Futhi manje isisezweni kakade. Ngaphezu kwalokho, manje kukhona kakade idatha kuqala ekusetshenzisweni esisebenzayo imishini. Hhayi kudala eChina, izifundo ezifanele sezenziwe. Umphumela waba ukudalwa lwegciwane igundane isibindi. Ngemva kwalokho, ukusebenza ukugxilisa isilwane sakhe kwenziwa. Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, nezitsha zonke usukhulile ndawonye kahle nesibindi ngokwayo isiqala ukusebenza ngokwanele.
Vision ingenye izinzwa ezinhlanu eziyisisekelo futhi umphakeli mayelana 90% azo zonke ulwazi ubuchopho bomuntu. Ngenxa yalokho, amehlo kanye nokusebenza kwabo uyohlale ukudlala indima enkulu. Akumangalisi ukuthi abaningi ipumelelo isayensi kwezokwelapha inqophe ukunina umbono ovamile noma ukulungiswa yehlile.
Enye okusungulile ezithakazelisayo, eyakhishwa muva nje, okubizwa ngokuthi umuntu telescopic lens. Isimiso wezenzo zazo yasungulwa isikhathi eside, kodwa ngaphambili azikaze esetshenziswa ukwenza ngcono isimo umbono wabantu. It kuvimbela isingeniso mass emisha enjalo kwezokwelapha umonakalo omkhulu obangelwa impahla kuyiphi umkhiqizo ekhiqizwa. It is kuhlelwe ukuba esikhundleni saso alethe eshibhile, ukuze senze umklamo atholakale umthengi jikelele.
Le mpi nomdlavuza
Kuze kube manje, lesi sifo esiyingozi kubhekwa ukubhekana ngosizo ukuhlinzwa, amakhemikhali, noma usebenzisa i-ray kuyabuchitha izimila. Zonke lezi zinqubo kungukuthi nje ukususa isifo (hhayi njalo 100%), kodwa nakho kuyinkinga enkulu ngoba umzimba iyonke. Iqiniso liwukuthi wonke la ukwelashwa nomthelela kuyinto eziyingozi hhayi kuphela iziguli, kodwa inyama ephilile. Ngakho namuhla, abaningi emisha e nemithi kuhloswe ngazo ukuthi kutholakale indlela ephumelelayo, okusheshayo nabangenacala ukulwa umdlavuza.
Omunye ngentuthuko yakamuva is dalo of imishini zokuhlola, ingxenye eyinhloko asebenzayo okuyinto uhlobo inaliti. It isetshenziswa isimila nendlala okuthiwa i Likhipha micropulses ekhethekile, ephoqa amaseli pathologically ashintshwe ukuze uqale inqubo self-ukubhujiswa.
On indima yesayensi emkhakheni wezokwelapha
Kufanele kuqashelwe ukuthi imithi yesimanje kula mashumi eminyaka ambalwa ukwenze kuyisinyathelo esikhulu phambili. Ngaphandle impumelelo ezingenakubalwa ososayensi kuyoba akunakwenzeka. Indima yesayensi kwezokwelapha ngesikhathi samanje kunzima overestimate. Kuyinto ngenxa yobuchwepheshe kukhona manje enjalo zokupopola ezifana Endoscopy, imisindo ephansi, ngekhompyutha futhi magnetic resonance imaging.
Ngaphandle ukuthuthukiswa oyisazi samakhemikhali ezinto eziphilayo ebandleni bekungekhe kukghonakale emisha sína imithi emkhakheni kwemithi. Ngenxa yalokho, odokotela kuzofuneka ukuthi namanje zisebenzisa izindlela zokuhlola ekwelapheni izifo ezihlukahlukene.
Kwentuthuko yesayensi kwezokwelapha nawo njengomnyango mkhulu kakhulu ngempela. Okokuqala, odokotela bakwazi ngempumelelo abaphathe izifo ukuthi yayikade akuvumelekile iziguli ithuba at impilo ejwayelekile. Ngaphezu kwalokho, izifo eziningi manje kungenzeka ukuxilonga kusaqalwa yentuthuko yabo. Futhi-ke, intuthuko enkulu kwezokwelapha baye basiza kakhulu ukwandisa iminyaka yokuphila iziguli eziningi. Kuleli khulu leminyaka elidlule, le nkomba kukhuphuke ngo-iminyaka engaba ngu-20. Ngesikhathi esifanayo iyakhula njalo futhi manje.
ukuhlola Okugcwele imizuzu embalwa
Sekuyisikhathi eside ososayensi kwadingeka umbono ukudala i-apharathasi okuyinto ikuvumela ukuba ngokushesha ukunquma khona kanye nohlobo nezilwanyana ezincane ukuthi hit umzimba womuntu. Njengamanje, ucwaningo olunjalo ngokuvamile kudinga hhayi izinsuku ngisho namasonto. ezintsha kwakamuva kwezokwelapha sipho ithemba lokuthi lesi simo uzoqhubeka isikhathi esifushane. Iqiniso lokuthi ososayensi Swiss baye bakwazi ukuqamba futhi udale i-prototype ye-apharathasi uyakwazi kwamaminithi ambalwa ukuhlonza micro-umzimba endaweni esinikeziwe, futhi ukunquma okuqondene yayo uhlobo oluthile. Leli gama ngeke cishe infallibly nika noma iyiphi inqubo yokwelapha okunengqondo yezifo ezithathelwanayo. Lokhu ngeke kuphela ukwehlisa isikhathi nobukhali izifo eziningi ezinkulu, kodwa futhi ukuba ligweme izinkinga ezingase zivele eziningi.
New kwezokwelapha lapho cishe masonto onke. Manje ososayensi baye ususondela okutholakele sina ukuthi kuzokwenza abantu abakhubazekile ukuze uthole kabusha ezingeni elifanele of umsebenzi womphakathi. Futhi lapha asikhulumi mayelana ezinye izindlela zobuchwepheshe. Namuhla kukhona amasu ezihlala njalo ezikwaziyo ukubuyisela ubuqotho emsipheni wabhujiswa. Lokhu kuzosiza iziguli nokukhubazeka kanye paresis alulame motor emakhono abo. Manje lokhu kwelashwa zisekhona ayebiza kakhulu, kodwa ngemva 5-10 iminyaka njengoba ziyatholakala kubantu engenayo ngempela abavamile.
Uyini Lingam? Lingam massage amasu
Kwesibeletho Hysteroscopy: ukubuyekezwa, imiphumela, Izimo
Idivayisi ye-ekhaleni "Fairy": ukubuyekezwa. Physiotherapy apharathasi "Fairy"
Massager "Umzimba uMbazi" - Umsebenzisi Izibuyekezo
Sithola izimbangela ukuqunjelwa kanye ekulweni nalesi sifo.
Ngubani oye waletha Harry Potter lokungabonakali isembatho: into izakhiwo nezinye izinsalela imilingo emhlabeni imilingo
"Kuban" Airline: Inkampani yenethiwekhi South Russia
Ukubona Taras Bulba enovelini "Taras Bulba". umkhiqizo Isici
Amandla umoya kanye nentuthuko yayo